नयाँ वर्षको पहिलो दिन सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा विसु पर्वको रौनक
बुधबार, वैशाख १, २०७८ NB Media Network
हरिश्चन्द्र बाग, कञ्चनपुर, ०१ बैशाख । आजबाट नयाँ वर्ष वि.सं. २०७८ साल शुरु भएको छ । हरेक वर्ष बैशाख १ गतेका दिन सुदूरपश्चिम प्रदेशका अधिकांश क्षेत्र र कर्णाली प्रदेशका केही क्षेत्रका पहाडी समुदायमा विसु पर्व मनाउने गरिन्छ । विसु पर्वमा मिठा–मिठा खानाका परिकार खाने र सिस्नो लगाउने प्रचलन पनि रहेको छ । एकापसमा सिस्नो लगायो भने सबै बिष नष्ट हुन्छ भन्ने जनविश्वास भएकोले यसो गरिने कञ्चनपुरको बेलडाँडी बस्ने संस्कृतिका जानकार भानुदेवी बागले जानकारी दिनुभयो । यो पर्वमा विशेष गरेर देवरले–भाउजु र नन्द–भाउजुहरुले एकापसमा सिस्नो लगाउने गर्दछन् ।
तर पछिल्लो समयमा भने सिस्नो लगाउने प्रचलन लोप हुँदै गएको छ । स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले पनि सिस्नो अत्यधिक मात्रामा भिटामिन ए भएको र यसको नियमित सेवनले मधुमेह लगायतका रोगबाट समेत मुक्ति मिल्ने आयुर्वेदिक जनरल फिजिसियन डा. राजेन्द्र प्रसाद भट्टको भनाइ छ । यस्तै सुदुरपश्चिमकै डोटी, अछाम, बझाङ र बाजुरामा नयाँ वर्षमा कसैलाई रोग नलागोस्, शरीरमा भएका सबै बिषहरु नष्ट होऊन् भनेर बिसुलोडा चलाउने परम्परा रहेको छ ।
कञ्चनपुर र कैलाली सहित पश्चिम नेपालको तराईँमा बसोबास गर्ने थारु समुदायले माघ १ गतेलाई नयाँ वर्षका रुपमा मनाउने गरेपनि बैशाख १ गतेलाई पनि विशेष दिनका रुपमा धुमधाम संग मनाउन थालेको स्थानीय थारु पत्रकार सरिता चौधरीको बताउनु भयो । नयाँ वर्षका अवसरमा प्रायः सबै नेपालीहरुका घरघरमा लिपपोत तथा रंगरोगन गरी घर तथा विभिन्न शक्ति पिठहरुमा पनि पुजाआजा गरिन्छ ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, वैशाख १, २०७८, १८:०४:००
सुदूरपश्चिम प्रदेशका डोट्याली समुदायको चैतलो भेटौलो पर्व शुरु
शिव मन्दिरमा सरसफाई
पञ्चकोशी चन्दननाथ एकता समाजको दोस्रो वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न
कञ्चनपुर र कैलालीका रानाथारू समुदायले मनाए प्रथम रानाथारू सूचीकृत दिवस
बेलडाँडी ३ वैवाहमा माघी मिलन कार्यक्रम
शुक्रबार, माघ २, २०७७ NB Media Network
नेवाः देय् दबू बेलौरी नगर समितिको अध्यक्षमा अशोक श्रेष्ठ
बुधबार, पुस १५, २०७७ NB Media Network